ဦးနှောက်ကို implants Paralysed က Man ကူညီပေးသည် - သတင်း Rule
ဦးနှောက်ကို implants Paralysed က Man ကူညီပေးသည်
ရှေ့ဆောင်အာရုံကြောရှောင်ကွင်းလက်ကောက်ဝတ်အတွက်ကြွက်သားနှင့်လက်ချောင်းများမှအချက်ပြမှုများကိုပေးပို့ဖို့ဦးနှောက်ထဲမှာ chip ကိုခွင့်ပြု, တစ်ကတ်ကိုပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့်ဂစ်တာသူရဲကောင်းကစားရန်ဖြစ်နိုင်အောင်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဦးနှောက်ကို implants လေဖြတ်သောသူသည်မိမိလက်ကိုဆ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်ကူညီပေးသည်” Ian ကနမူနာသိပ္ပံအယ်ဒီတာကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 13 ခုနှစ်ဧပြီလအပေါ်များအတွက် 2016 17.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ခြောက်နှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ဦးမတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက်အောက်ပိုင်းသေနေသူတစ်ဦးကအသက် 24 နှစ်အရွယ်လူသည်မိမိလက်ကောက်ဝတ်နှင့်လက်ချောင်းရွှေ့သောကြွက်သားကိုတိုက်ရိုက်သူ့ဦးနှောက်ထဲကနေအချက်ပြပို့ပေးထားတဲ့ implants သုံးပြီးမိမိလက်ကိုအချို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်.
တစ်ဦးအာရုံကြောရှောင်ကွင်းအဖြစ်လူသိများ, အ implants မှ Ian Burkhart တစ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုပွတ်ဆွဲခွင့်ပြု, ဗွီဒီယိုဂိမ်းကစား, ဂစ်တာသူရဲကောင်း, နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပုလင်းဖွင့်ကောက်နေနှင့်အကြောင်းအရာများကိုလောင်းအဖြစ်လုပ်ရပ်လုပ်ဆောင်, နားတော်မှတစ်ဦးကိုဖုန်းကိုင်ပြီး, တစ်ခွက်ကိုနှိုးဆော်. သူကနည်းပညာကနေအကျိုးခံစားရဖို့ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်.
Burkhart, ဒပ်ဘလင်မြို့ကနေ, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်, သူတစ်ဦးက hidden sandbar ပေါ်သို့သူ့ကိုစွန့်ပစ်တဲ့လှိုင်းလုံးသို့ dived အခါ, ကောလိပ်၌သူ၏ပထမဦးဆုံးဒီနှစ်ကုန်ကျင်းပမယ့်ကမ်းခြေအားလပ်ရက်အပေါ်ခဲ့သည်. သူဟာခဲ့သည် 19, အလွန်အမင်းလွတ်လပ်သော, ဒီလိုမတော်တဆမှုသူ့ကိုဒဏ်ခတ်စေခြင်းငှါထည့်သွင်းစဉ်းစားဖူး.
သက်ရောက်မှုများအင်အားအဂ5အဆင့်မှာ Burkhart ရဲ့လည်ပင်းရိုက်ယူခဲ့သည်. သူကဆဲအချို့သောအတိုင်းအတာအထိအားမိမိလက်နက်ကိုရွှေ့နိုင်, ဒါပေမဲ့မိမိလက်နှင့်ခြေထောက်အချည်းနှီးခဲ့ကြ. သူငယ်ချင်းများရေထဲကသူ့ကိုဆွဲထုတ်နှင့်နှိုးဆော်သံထမြောက်စေတော်. အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်, တစ်ဦးကိုချွတ်-တာဝန်မီးသတ်သမားကမ်းခြေပေါ်ခဲ့သူနာပြုကိုခေါ်.
Burkhart အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှဆရာဝန်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူဒဏ်ရာများအတွက်ကုထုံးခဲ့. အစမှ, သူကမျှော်လင့်ခဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတိုးတက်လာ အသက်တာ၏ကသူ့အရည်အသွေးကိုတိုးတက်မယ်လို့. သူဟာသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်စိတ်ဝင်စားနှင့်အသစ်နည်းပညာများ၏စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့တာအသင်းကိုသို့ပြောသည်.
အဆိုပါအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်သုတေသီများ Battelle လို့ခေါ်တဲ့မေတ္တာအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတစ်ဦးအာရုံကြောရှောင်ကွင်းအပေါ်မိမိတို့လက်တယ် Burkhart အ implants တပ်ဆင်ရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း. "ဒါကဒေါ်လာသန်းမေးခွန်းခဲ့သည်: သငျသညျဦးနှောက်ခွဲစိတ်မှုဒါမှမဟုတ်သင်အကြိုးခံစားမပြုစေခြင်းငှါအရာတစ်ခုခုရှိချင်ကြဘူး. အန္တရာယ်များတွေအများကြီးရှိပါတယ်,"Burkhart ကပြောပါတယ်. "ဒါဟာဆက်ဆက်ငါအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာစဉ်းစားရန်ခဲ့ရသည်တစ်ခုခုခဲ့သည်. ဒါပေမယ့်ပါဝင်ပတ်သက်သူအပေါင်းတို့ကိုအသင်းနှင့်လူတိုင်းနှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက်, ငါကောင်းသောလက်၌ခဲ့သိသည်။ "
သူကရှေ့ဆက် သွား. ခွဲစိတ် ရရှိ. သူ့ဦးနှောက်၏မော်တာ cortex သို့သေးငယ်သောကွန်ပျူတာချစ်ပ်တပ်ဆင်. ဒီမှာ, ထို chip ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်သောမော်တာ cortex ၏အစိတ်အပိုင်းကနေလျှပ်စစ်အချက်ပြတက်ခူး.
အလက်ဖျံပေါ်တစ်ဦးအထူးလုပ်လက်လက်လှုပ်ရှားမှုနိုင်ပါတယ်သောဦးနှောက်၏မော်တာ cortex အတွက်သေးငယ်တဲ့ chip ကိုမှအချက်ပြမှုများအားလက်ခံတွေ့ဆုံ. ဓါတ်ပုံ: အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ Wexner Medical Center မှ / Batelle
ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုများ၏ fuzz ကွန်ပျူတာသို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာရသူကျောရိုးကိုရှောင်ကွင်းနှင့် Burkhart ကသူ့လက်ဖျံပေါ်မှာကျီတစ်လက်ကိုချိတ်ဆက်တဲ့လျှပ်စစ်ပဲမျိုးစုံသို့ကူးပြောင်းသည်. ထိုအရပ်မှ, 130 လျှပ်အောက်ကြွက်သားမှအရေပြားကနေတဆင့်ပဲမျိုးစုံပေးပို့, သူတို့လက်ကောက်ဝတ်နှင့်ပင်သီးခြားလက်ချောင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်ဘယ်မှာ. ထိုအချက်ပြ၏ပုံစံများ Burkhart အောင်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်အလှုပ်ရှားမှုများကိုထုတ်လုပ်ရန်ညှိနေကြတယ်.
ဒါဟာကိရိယာကိုသုံးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့အချိန်ကိုယူ. ကျော်လွန် 15 လများ, Burkhart မိမိလက်ကိုလှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူတစ်ပါတ်သုံးအစည်းအဝေးများမှတက်ကုန်.
"အစပိုင်းမှာကျွန်တော်တိုတောင်းတဲ့အစည်းအဝေးပြုပါချင်ပါတယ်ငါစိတ်ပိုင်းအတန်ငယ်မောနဲ့မောပန်းခံစားရချင်ပါတယ်, ငါသည်တခြောက်ခုသို့မဟုတ်ခုနစျပါးနာရီစာမေးပွဲဖြေဆိုခဲ့ချင်ပါတယ်တူ. ဘို့ 19 ခွင့်ပြုဘို့ငါ ယူ. ငါ့အသက်ကို၏အနှစ်: ငါထင်နှင့်ငါ့လက်ချောင်းရွှေ့. သို့သော် ပို. ပို. အလေ့အကျင့်နှင့်အတူကအများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်. ဒါဟာဒုတိယသဘာဝပါပဲ။ "
"ပထမဦးဆုံးအချိန်ငါသည်ငါ့လက်ကိုပြောင်းရွှေ့, ငါသည်ဤအလုပ်လုပ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင်း သိ. မျှော်လင့်ချက်ကြောင့်တုန်ခါမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်, တဖန်ငါငါ့လက်ကိုအသုံးပွုရနိုင်ပါလိမ့်မည်. အခုပဲ, ကသာလက်တွေ့ setting ကိုရဲ့, ဒါပေမဲ့လုံလောက်တဲ့လူတို့နှင့်အတူပေါ်မှာအလုပ်လုပ်, နှင့်လုံလောက်အာရုံစူးစိုက်မှု, it can be something I can use outside of the hospital, at my home and outside my home, and really improve the quality of my life,"ဟုသူကဆိုသည်.
Burkhart performed the first movements using thoughts alone in 2014, but has since learned more complex actions and more precise control over his hand and fingers. Details of the latest results are published in သဘာဝ.
Chad Bouton, who helped create the device, said the study marked the first timeaperson living with paralysis had regained movement using signals recorded from within the brain. “We think this is an important result as we try and pave the way for other patients in the future, not only those with spinal injuries, but also those that have experiencedastroke, and potentially even traumatic brain injury,"ဟုသူကဆိုသည်.
Nick Annetta, an electrical engineer on the team, said the team was working to make the system smaller and useful forabroader range of patients. “This could be applied to other motor impairments, not just spinal cord injuries,"ဟုသူကဆိုသည်. “We think this is just the beginning.”
27957	10 အပိုဒ်, Disability, အင်္ဂါရပ်များ, ကျန်းမာခြင်း, မှ Ian နမူနာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနများ, neuroscience, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်, သိပ္ပံ, Society က, နည်းပညာ, ဗြိတိန်သိပ္ပံ, အမေရိကန်သတင်း, ကမ္ဘာ့ဖလားသတင်း
← iPhone ကို vs အရှေ့တောင်. iPhone ကို 6S [VIDEO] Google က v ဥရောပ: ဘယ်လိုက Android တစ်ဦးစစ်ဖြစ်လာ →